Solar Thermal Hybrid Heat Pump Factory, mpamatsy - mpamokatra paompy hafanana hafanana mafana be mpamokatra hafanana
Ny paompy hafahafa Solar Hybrid heat pump dia ny rafitra rano mafana miaraka amin'ireo mpanangona takelaka fisaka
Ny rafitra fanamainana hafanana Solar + heat pump dia manome ny fomba mahomby indrindra amin'ny fanamafisana ny rano, toy ny amin'ny orana na rahona, ny mpanafana rano nentin-dra amin'ny masoandro dia tsy afaka mamokatra rano mafana amin'ny masoandro ary tsy maintsy mampiasa heater elektrika hanafanana ny rano. Ny paompy hafanana dia afaka manolo ny heater herinaratra hiasa, mitahiry be indrindra ny vidiny ho anao.
Rafitra fanafanana rano mafana mifangaro hafanana avy amin'ny masoandro miaraka amin'ireo mpanangona masoandro takelaka
Ny rafitra fanamafisam-peo hafanana an'ny masoandro an'ny solarshine an'ny solarshine miaraka amina mpamory masoandro takelaka dia rafitra iray mahomby izay afaka mamonjy ny vidin'ny fanafanana 90% farafaharatsiny.
Solarshine's Solar thermal hybrid heat pump water heat system dia rafitra iray mahomby izay afaka mamonjy ny vidin'ny fanafanana 90% farafaharatsiny. Izy ireo dia mety alohan'ny tetik'asa fanamainana rano mafana sy trano mafana. Miaraka amin'ny vovo fantsona mpamory herinaratra dia afaka mamonjy ny vidin'ny fitaovana ihany koa.
Solar Thermal Hybrid Heat Pump System dia be mpampiasa amin'ny toerana misy fanjifana rano lehibe, toy ny ozinina, sekoly, dobo filomanosana ary trano fandroana.
Ity rafitra ity dia afaka manampy ny sekoly hamonjy ny rano mafana fanafanana rano 90% farafahakeliny.
Solar Thermal Hybrid Heat Pump momba ny rano mafana ho an'ny orinasa
Amin'ny alàlan'ny fanangonana ny mpamory hafanana masoandro sy ny paompy hafanana, ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny angovo azo avy amin'ny rivotra, ity rafitra ity dia mitsitsy 90% ny vidin'ny angovo amin'ny fanafanana rano mafana ao amin'ny orinasa.
Vacuum Tube Solar Collector Hybrid Heat Pump Water Heater
Ny rafitra fanafanana rano mahomby sy azo antoka indrindra.
Makà rano mafana maimaimpoana amin'ny andro mainina.
Mampiasà paompy hafanana amin'ny andro orana, vonjeo ny vidin'ny fanafanana 75%.
Solar Thermal + Heat pump Hybrid System ho an'ny Tetikasan'ny rano mafana afovoany
Ny rafitra fanafanana rano mifangaro avy amin'ny herin'ny masoandro an'ny solarshine an'ny solarshine dia mitambatra amin'ireo mpanangona masoandro fantsom-bokatra avo lenta na mpanangona masoandro amin'ny takelaka, paompy hafanana, loharano fitehirizana rano mafana, paompy sy faritra manampy toy ny fantsona, valves sns.
Intelligent Solar Thermal mitambatra hafanana paompy hafanana Rafitra fanafanana rano mafana
Ny rafitra fanamainana rano mahomby sy azo antoka indrindra. Makà rano mafana maimaim-poana amin'ny andro main'ny masoandro amin'ny alàlan'ny fampiasana mpamory masoandro sy paompy hafanana amin'ny andro orana, tsy misy heater elektrika intsony, afa-tsy 90% vidin'ny fanafanana.
Hatramin'ny 90% Mamonjy angovo hafanana Solar Hybrid heat System mafana ho an'ny rafitra rano mafana afovoany
Ny rafitry ny rano mafana sy ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy hafanana dia mampifangaro angovo masoandro sy angovo hafanan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny fomba mahomby, ary mandray ny angovo avy amin'ny masoandro ho foto-kevitra famolavolana, ary ny paompy hafanana angovo an'habakabaka dia ampiasaina ho famenon'ny andro orana sy rahona mitohy. Ny rafitra dia afaka mamonjy angovo hatramin'ny 90% raha ampitahaina amin'ny fanamafisana ny herinaratra na ny entona.